Mpanamboatra sy mpamatsy vy tsy misy fangarony - China Factory vy harato vy
Stainless Steel Dutch manenona Wire harato
Stainless Steel dutch tenona tariby harato, fantatra ihany koa amin'ny indostrialy vy lamba sivana, amin'ny ankapobeny dia amboarina amina tariby mifamatotra elatra manome tanjaka mekanika nohamafisin'ny filtration filtration. Manolotra lamba sivana metaly indostrialy feno amin'ny valin-drakitra tsotra, valaka am-paosy ary tenona dutch mivadika izahay. Miaraka amin'ny salan'isan'ny sivana manomboka amin'ny 5 μm ka hatramin'ny 400 μm, ny akanjonay sivana tenona dia novokarina tamin'ny akora maro samihafa, savaivony tariby ary habe fanokafana mba hifanaraka amin'ny fitakiana filtration samihafa. Ampiasaina be izy amin'ny fampiharana filtration isan-karazany, toy ny singa sivana, menaka & polymer filters ary extruder filters.
Harato: Avy amin'ny 90 metaly ka hatramin'ny 635 harato
Karazana tenona: tenona tsotra / tenona ahitra
1. Ampiasaina amin'ny fisavana sy fanivanana eo ambanin'ny toetry ny tontolo iainana asidra sy alkaly, toy ny lamba lamba shaker shaker ao amin'ny indostria solika, ho toy ny sivana jiro ao amin'ny indostrian'ny fibre simika sy simika, ary ho toy ny bolongana pickling ao amin'ny indostrian'ny electroplating.
2. Izy io dia be mpampiasa amin'ny indostria sy ny indostrian'ny fananganana hanivanana ny fasika, ranoka ary entona, ary azo ampiasaina ho fiarovana amin'ny fiarovana ireo kojakoja mekanika.
3. be mpampiasa amin'ny fanasivanana sy ny sivana ary fiarovana amin'ny sehatry ny haingon-trano, harena ankibon'ny tany, solika sy indostria simika, sakafo, fanafody, fanamboarana milina, haingon-trano, elektronika, aerospace ary indostria hafa
Stainless Steel Coarse Wire harato
Bolongana: Avy amin'ny bolongana 1 ka hatramin'ny 80mesh